Umaki: ifu lokumaketha | Martech Zone
Umaka: ifu lokumaketha
Ukuqonda Izinselele (Nokukhungatheka) Zokuklama I-imeyili Ye-HTML
NgoLwesithathu, ngoMashi 23, 2022 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
NgoMsombuluko, Mashi 14, 2022 NgoMsombuluko, Mashi 14, 2022 Manash Sahoo
Ifemu yethu isanda kusebenzisa i-Salesforce Marketing Cloud kuklayenti elinokuhlanganiswa okucishe kube kweshumi nambili okube nemithetho yezinguquko eyinkimbinkimbi nezokuxhumana. Impande bekuyisisekelo sakwaShopify Plus esinokubhalisela ukushajwa kabusha, isixazululo esidumile nesiguquguqukayo sokunikezwa kwe-e-commerce okubhaliselwe. Le nkampani inohlelo olusha lokusebenzisa imiyalezo yeselula lapho amakhasimende engalungisa khona ukubhalisa kwawo ngomlayezo wombhalo (SMS) futhi kwakudingeka athuthele abathintwayo beselula baye ku-MobileConnect. Amadokhumenti e-
Ngonyaka odlule, besisebenza nenkampani kazwelonke ekufudukeni nasekusebenziseni okuyinkimbinkimbi kwe-Salesforce ne-Marketing Cloud. Ekuqaleni kokutholakala kwethu, sikhombe izingqinamba ezithile ezibalulekile maqondana nokuncamelayo kwabo - obekususelwa ekusebenzeni kakhulu. Lapho inkampani yakha umkhankaso, babezodala uhlu lwabemukeli ngaphandle kwesikhulumi sabo sokumaketha nge-imeyili, balayishe uhlu njengohlu olusha, baklame i-imeyili, bese bethumela kulolo hlu.
Abathengisi bavame ukubona ukwenza ngezifiso i-imeyili njengenkomba ekusebenzeni okuphezulu kwemikhankaso ye-imeyili futhi bayisebenzise kakhulu. Kepha sikholelwa ukuthi indlela ehlakaniphile yokwenza ngezifiso i-imeyili inika imiphumela engcono ngokubuka kokubiza izindleko. Sihlose ukuthi indatshana yethu ivuleke kusuka kuma-imeyili amaningi amadala kuye ekwenziweni kwe-imeyili okuyinkimbinkimbi ukuze kuboniswe ukuthi amasu ahlukahlukene asebenza kanjani ngokuya ngohlobo lwe-imeyili nenjongo. Sizonikeza ithiyori yethu